ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အောင်မြင်မှုကိုသုံးခုအကြောင်းသိကောင်းစရာများ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: မေ. 25 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့မြင်ကွင်းတစ်ခုမှနယူး? ကောင်းစွာ, ယုံကြည်သို့မဟုတ်မ, အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နည်းတူယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိနိုင်ပါသည်, မပိုလျှင်, အစဉ်အလာချိန်းတွေ့ထက်. သင်ဟန့်တားကြောင်းမခံပါနဲ့, သို့သော်. လူအတော်များများရက်စွဲတစ်ခုကိုတွေ့ကြပြီ, မကြာခဏအိမ်ထောင်မင်္ဂလာ, အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုမှတဆင့်. သင့်ပရိုဖိုင်းကိုသင့်ရဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုအပေါ်သတိပြုမိရကူညီနိုင်ကြောင်းအကြံပြုချက်နှင့်မဟာဗျူဟာရှိပါတယ်. ဒီနေရာတွင်ကသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်ကိုကြည့်ပေးပြီးသင်ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းကိုချစ်လိုလူစားမျိုးကိုဆွဲဆောင်ရန်လိုအပ်သည်ခံစားနိုင်ယူနိုင်တယ်သုံးမဟာဗျူဟာကျသောခြေလှမ်းများ.
အဖျား 1: ပြီးပြည့်စုံသော Profile ကိုဓာတ်ပုံ Pick
သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းဖို့လူတွေကိုဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မည်အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်. ပထမဦးဆုံးနှင့်ဗွေဆော်, သင်ကမကြာသေးခင်ရုပ်ပုံလွှာရှိသည်သေချာအောင်. သေချာတာပေါ့နောက်ကျောမှာကောလိပ်ကျောင်းနွေဦးပေါက်ချိုးပေါ်တွင်ရေကူးဝတ်စုံနဲ့နေစဉ်၌သင်၏ရုပ်ပုံလွှာ 1995 ချစ်စရာဖြစ်မည်အကြောင်း, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့နေ့စွဲကိုသင်ကောလိပ်ကျောင်းပြုတူကိုကြည့်ဖို့သင်မျှော်လင့်တွေ့သောအခါ, သင့်ရဲ့နေ့စွဲ, ရှက်ကြောက်ရလိမ့်မည်. ဒီမယုံကြည်မှုများဖန်တီးနှင့်သင့်ရက်စွဲစိတ်ဆိုးခံစားတတ်စေခြင်းငှါလှည့်ဖြားခြင်းနှင့်နိုင်ပါတယ်. ဆက်ဆံရေးစတင်ရန်ကြိုးစားနေသောအခါဤသည်ကောင်းသောအရာကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်.
လည်း, သင့်အတွက်အကောင်းဆုံး features တွေချွတ်ပြလတံ့သောဓာတ်ပုံတပုံကိုရွေးချယ်ပေးပါ. သင်ကရင်းနှီးဖော်ရွေသောအပြုံးဝတ်ဆင်ထားကြသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ, ထိုသို့အလေးအနက်ထားဟန်ထက်အများကြီးထက်ပိုသော invitation ရလိမ့်မည်သို့မဟုတ်, သိသိသာသာ, တစ်ဦးမျက်မှောင်ကြုတ်. သင်သည်အခြားသူတစ်ဦးနှင့်အတူအဘယ်မှာရှိပါဓါတ်ပုံတွေကိုအစဉ်အမြဲရှောင်ရှားနိုင်ရန်, သို့မဟုတ်, ပိုဆိုးသေး, သင်သည်ထိုဓာတ်ပုံကိုထုတ်ခြင်းအခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကုန်တယ်ပါပြီ, လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောလက်ရုံးကိုထားခဲ့ဖို့သာ. သင့်ရဲ့နေ့စွဲလူတစ်ဦးအမှန်တကယ်သင်သို့မဟုတ်အìmysteriousစစ်တပ်ကပိုင်သောသူအံ့သြစရာဖြစ်သည့်အားဖြင့်ရောထွေးစေမည်အကြောင်း.
အဖျား 2: သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုဖော်ပြ Your Username ကိုသုံးပါ
သင့်ရဲ့အသုံးပြုသူအမည်သင့်ရဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုကို log in ကိုယ့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ထင်ကြပေမည်, သို့သော်ဤအမှုကိစ္စisnít. သင့်ရဲ့ username တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်အကြောင်းဖတ်လိမ့်မည်ကောင်းတစ်ဦးအသုံးပြုသူအမည် Profile တစ်ခုအမြင်နှင့်ပရိုဖိုင်ကို pass တက်အကြားကွာခြားချက်ကဘာကိုဆိုလိုနိုင်ကြောင်းပထမဦးဆုံးအမှုအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. တစ်ဘုံ technique ကိုìJenny321îကဲ့သို့အစဉ်အလာအမည်မသိအသုံးပြုသူအမည်နှင့်အတူလိုက်ရန်ဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်someoneísအာရုံစိုက်ကိုဖမ်းသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ထုတ်ဖေါ်ဖို့အဓိကသော့ချက်တစ်ခုအခွင့်အလမ်းပေါ်ထွက် miss?
သင့်ရဲ့ username မူရင်း Make နှင့်သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် ပတ်သက်. အနည်းငယ်တစ်ခုခုပြောပါစေ. '' SweetSinger Pick’ သင့်ရဲ့ username အဖြစ်သင့်အနေနဲ့ avid Dodgers ယပ်တောင်ကုမ္ပဏီရှာနေလျှင်သင့်ဝါသနာသီဆိုသို့မဟုတ်ìDodgersDudeîလျှင်. သင့်ရဲ့လိမ္မာပါးနပ်အသုံးပြုသူအမည်သာသင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားနှင့် ပတ်သက်. အနည်းငယ်မျှဝေမည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်လည်းတူညီသောအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူလူကိုဆွဲဆောင်နိုင်. သို့သော်မှားယွင်းသောထင်မြင်မပေးရန်သတိပြုရကြမည်. သင်ပျော်စရာရှိသည်ကိုချစ်ဆိုလိုမှ username ကိုìFunLovinîအနက်ကိုဘော်ပြဘာလို့လဲဆိုတော့, သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်ကိုကြည့်ရှုခြင်းလူတစ်ဦးìFunLovinîအချို့ကိုသင်ပျော်စရာရှာကြသည်ကိုဆိုလိုသည်ထင်ကြပေမည်loviní, ကျွန်တော်ဘာဆိုလိုတယ်ဆိုတာကိုသင်သိရင်.
အဖျား 3: ဒါဟာဆိုရမည်Donít, ဒါဟာသက်သေပြ! နှင့်တိကျသော Be
သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်ကိုဖေါ်ပြချက်သည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲလိုက်တဲ့အခါ, သင်သည်ဤသည်ရိုးရိုးအခြား profiles ထောင်ပေါင်းများစွာပေါ်တက်ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းadjectivesÖတူညီတဲ့ adjective နာမဝိသေသနတစ်ခုပျင်းစရာစာရင်းဖြစ်သည်humor.îကောင်းတစ်ခုသဘောမျိုးနဲ့ရယ်စရာကောင်းတဲ့, smart ìIímတူတစ်ခုခုရေးဖို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေခြင်းငှါ. သင့်ပရိုဖိုင်းကိုတကယ်ထွက်ရပ်ချင်တယ်ဆိုရင်, သင်သည်တိကျသောအချက်အလက်များမှတဆင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်ပြရန်ရန်လိုအပ်ပါတယ်.
အဲဒီအစားသင်ဖြစ်ကြသည်ဟုပြောဆိုလျက်၏ “ရယ်စရာ” သို့မဟုတ်တစ်ဦးရှိသည် “ဟာသဥာဏ်ကောင်းသော”, သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်ကိုရယ်စရာလုပ်. နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောပြက်လုံးတွေပြက်၏စုံတွဲတစ်တွဲကို Crack တစ်ခုသို့မဟုတ်ရယ်စရာအဖြစ်အပျက်ဆက်စပ်. ဒါဟာသင်အဘယ်ဟာသဥာဏ်မျိုးကိုသင့်ရဲ့ကြည့်ရှုသူမှသက်သေပြပါလိမ့်မယ်. ဟာသသင့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပရိသတ်ကိုအဖို့ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သူတို့သည်သင့်ကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်. ယင်းအစားပဲသင်ìsmartîဖြစ်ကြောင်းတင်ပေးလိုက်ထက်, သင်ဘယ်လောက် smart သင့် viewer မှသက်သေပြမယ်လို့သင်အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်တွေဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုစာရင်းပြုစု. ဒီစသင့် viewer သူသို့မဟုတ်သူမဆီတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုအချို့သောတိကျသောနမူနာကိုပေးမည်.
သတိရ, သင်က profile ကိုတက်ရှိသည့်ကြောင့်ဆိုသော်, သေချာပေါက်doesnítကိုသင်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုများကိုရလိ​​မ့်မည်ဟုဆိုလို. ဤသုံးပါးသောအကြံပြုချက်များဆက်ဆက်ကူညီပေးပါမည်, သင်လိုချင်တဲ့ရလဒ်တွေရဖို့စတင်မှီတိုင်အောင်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်ကိုရဲ့ contents နှင့်အတူလှည့်ပတ်ကစား. အဘယ်သူမျှမအကျိုးစီးပွားကိုသင့်ရဲ့စာရင်းတုံ့ပြန်ရန် အကယ်., အချို့သောလူသစ်များကိုတင်. သင်တို့ကိုလက်ခံတုန့်ပြန်အဘယ်သို့ကြည့်ဖို့ခဏတစ်တိုင်းတစ်ချိန်ကသင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေ Switch. သင်သည်သင်၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ profile နဲ့စမ်းသပ်အဖြစ်, သင်မျှော်လင့်သင့်အဘို့ရှာကြပြီတုံ့ပြန်မှုကိုရှာဖွေစတင်မည်.